“ သင့်ချစ်သူက သင့်ကိုလက်ဆောင်တစ်ခု ပေးလာမယ်ဆိုပါက ဘယ်လိုမျိုး လက်ဆောင် ဖြစ်မယ် လို့ထင်လဲ ”
ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် သူနှစ်သက်လို့ ပေးတာဆိုတော့ နှစ်သက်ပါတယ်/ ကြိုက်လဲကြိုက်ပါတယ်။
Post By :့ honey
Post By : 82 thinzar
သူပေး တဲ့ လက်ဆောင်ကိုတော့မြတ်မြတ်နိုး နိုးသိမ်း ထားမိမှာ ပါ ... ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ paper နဲ့လုပ်ထားတဲ့အရုပ်ကလေး ဆိုလဲ သိမ်း ထား မိမှာပါပဲ
အချစ်ဆိုတာက တကယ်ရှိတာလား ... တွေ့ဖုး သမျှ အတွဲ တွေက တော့ ....... ချစ်ပြီး တော့ ပစ်သွားတတ်တာ အချစ်လား ... ပိုတဲ့ ဘက်ပါသွားတတ်တာ အချစ်လားနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းတတ်တာ အချစ်လား အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့ ကောင်လေး တွေက ကောင်မလေး တွေလောက် အစွဲ အလမ်း မကြီး ကြဘူး လေ... ပြီးတော့သူတို့ ဘက် က ရယူခြင်း တွေကြည့်ပါပဲ ပေးဆပ်တဲ့ အချစ်တွေ က မိန်း ကလေး တွေမှာ အများ ဆုံး ရှိတာ ပါ စွဲ လမ်း တတ်တဲ့ စိတ်ကလဲ မိန်းကလေး တွေ မှာ ပဲ တွေ့ ရတာ များ တယ်.......မဟုတ်ဘူး လို့ မငြင်းပါနဲ့ .......
သူကျွှန်မကို ဘာတွေပဲပေးခဲ့ပေးခဲ့ ကျွှန်မသူ့ကို တောင်းခဲ့တာ... အာ....... ဘွား...........
Post By : lmk
Post By : yelinn
I hopeasmile.
Post By : someone
thu bar pay pay lo chin mi mar par. thu yae achit , nar lal mu , thit sar shi mu twae ko latt saungapyit ra kae yin kaung mar pal.
chit thu thar koe ah nar shi yin min si ka bar lat saung ma lo chin bu lay. chit thu thi pr sae.
Post By : swan
ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး ကတ်စီးနဲတဲ့ ဦးလေးကြီးမို့လို့
Post By : phyut48
chit thu si ka nar lae mu lae twe pae lo chin par tae
Post By : pantra
လာမယ်ကို့ မွေးနေ့ မှာသူပေးတဲ့မွေးနေ့ လက်ဆောင်ကသူကိုယ်တိုင်ဆို၇င်သိပ်ကောင်းမှာဘဲဗျာ ငယ်ပေးနိုင်မှာလား
သူပေးတဲ့ လက်ဆောင် ဟာ.သူ့ ရဲ့ နှလုံးသား ပဲ ဖြစ်ပါစေလို့ .......
If u give beautiful love and sweet kiss to me again,I am very happy......
Post By : may thu (laypyay.laypyay09)
Post By : bab3 lay
သူ ပေးချင်တာ ပေးအကုန်ယူမယ် အလကား၇တာပဲ ........ဟဲဟဲ
Post By : zeronine
I want to beautiful loves
Post By : Zin Lai
bar present phit ma lal dot i lal ti woo. but i thu si ca ah lo chin sone su ka dot. i co ah myae chit nay mal so tat su pal pot.
Post By : အသည်းကွဲနေသောသူ။
Trust is the best gift
Post By : နောင်
Post By : nge lay
Post By : orange
သူဆီကဘာလက်ဆောင်မှာမလိုချင်ဘူး ။ အချစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှု ရရင်တော်ပါပြီ
Post By : sumeesan
သစ္စာရှိမှု အဲဒါလေးပဲ လိုချင်တယ်
Post By :ိdreamcreator
ad chit pal phit pho tay char par tal
bar pal phyi phyi pop thu ka chit loz pay tar pal yu ya hnar pop
သူနှလုံးသားနဲ့ သူ့စေတနာနဲ့ သူ့ရဲ့ကျွန်တော့်အပေါ်ချစ်တဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ ပေးတဲ့လက်ဆောင်ဟာ သူရဲ့ဘ၀လို့ထင်တယ် ...........(အသည်းကွဲပြီး မချစ်တတ်သောကောင်မလေး ကိုယ်မင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ် မင်းရေးထားတာတွေကိုကြိုက်တယ် ကိုယ်မင်းနဲ့ခင်မင်ချင်တယ် ကိုယ့်အကောင့်ကို ၀င်ပေးပါနော် ) အဖြူရောင်သူငယ်ချင်း အဖြစ်နဲ့ခင်မင်လျှက်..................။
ကို.ဆီကလိုချင်တာက အချစ်တွေရယ်၊သစ္စာတရားတွေရယ်၊နောက်ဘယ်သူကိုမှမချစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကတိ ရယ်ပဲလိုချင်တယ်။
Post By : မေ
a chit so tyar kan sa rab yin kg par tal
Post By : barani
Post By : မိုး
မလိုချင်ဘူး ကိုယ်ကယူလို.ရှိရင်ပြန်ပေးနေရမှာပေါ့နော် မပေးနိူင်ပါဘူးနော် မုန်.ဖိုးကုန်မှာပေါ့ မာမီတို.ဒက်ဒီတို.မုန်.ဖိုးမပေးရင်သုံးရစရာမရှိဘဲနေမှာပေါ့နော် မုန်.မစားဘဲမနေနိူင်ပါဘူးနော်
သူလက်ဖ၀ါးလေးဆုပ် ပြီးဘာမှမပါဘဲ ပေးရင်တောင် တန်ဘိုးရှိတယ် လက်ဖ၀ါးလေးထဲမှာ သူအချစ်တွေပါတယ်လေ
နောက်ထပ် သူဘယ်သူ့ကိုမှမချစ်နိုင်တော့အောင် သူ့ဆီမှာရှိသမျှအချစ်အားလုံးကို လက်ဆောင်အဖြစ်လိုချင်တယ်
Post By : saung
မမဆီကအချစ်ကလွဲလို.ဘာမှမလိုချင်ဘူး။ မမပထမဆုံးပေးခဲ့လက်ဆောင်က ဘောပင်လေးအရမ်းချစ်ဖို.ကောင်းတယ် မမကိုယ်တိုင်ဖဲကြိုးလေးနဲ.စည်းပေးခဲ့တာအခုအချိန်အထိအမှတ်ရနေဆဲပါ။ ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကသော့ချိတ်ကိုမမကပေးခဲ့တာ အခုတော့မမကမပေးတော့ဘူး ကျွန်တော်ချစ်တာကမောင်နှမအချစ်ထက်ပိုနေတာကိုမမကသိသွားလို. မပေးတော့ဘူး ကျွန်တော်ဝမ်းမနည်းဘူး ကျွန်တော်ကအချစ်တွေပဲလိုချင်တာ လက်ဆောင်မလိုချင်ဘူး အရမ်းချစ်ဖို.ကောင်းပြီးအရမ်းမာနကြီးတဲ့ မမမေအိမ့်ချစ်သို.
အချစ်ဆုံးဆီက" သစ္စာတရား " ကိုထာဝရလက်ဆောင်အဖြစ်လိုချင်တယ်။
Post By : မေမြန်မာ
i am only one.so ,i have one present.that is love .but do not know that who give me
Post By : snow white
မလိုချင်ပါဘူး သူဆီကယူရင်ကိုယ်ကပြန်ပေးနေရမှာပေါ. မပေးနိူင်ပါဘူးနော် မုန်.စားရင်မုန်.ပြန်ကျွေးနေရမှာပေါ. ဒါကြောင်.ပိုက်ဆံကုန်လို.မကျွေးချင်ဘူး လက်ဆောင်လဲမလိုချင်ဘူး ဟီဟီ
Post By : ဇွဲ
တကယ်လို့ကိုယ့်ချစ်သူဆီက လက်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံလိုက်ပါမယ်......အဲဒီလက်ဆောင်က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့......အမုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်.....အလွမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်.... သူကကျေနပ်စွာပေးတဲ့လက်ဆောင်ပဲ ယူထားရမှာပေါ့
Post By : lover
အရင်တုန်းက ရခဲ့တဲ့အချစ် ပြန်ပေးရင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီ အရုပ်တစ်ရုပ်နဲ့အနမ်းတစ်ချက်ဆိုရင်တော့ ပိုမှန်မယ် ထင်ပါတယ်
အချစ်ဆုံးဆီက အလွမ်းလက်ဆောင်တော့ ရခဲ့ဖူးတယ်။
Post By : သဲဦး
ုရှိမှပဲ စဉ်းစားတော့မယ်နော် .............
Post By : ချွဲခုံကျိုး
ကျွန်မချစ်သူထံမှ မလိုချင်သော အရာမှာ လျစ်လျူရှုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Post By : ဒီဇင်ဘာ 30
Post By : starflower@swaltaw
သူကျွန်မကိုပြောခဲ.ဘူးတယ် Poohအရုပ်ကိုဝယ်ပေးမယ်တဲ. ကျွန်မမလိုချင်ဘူးလို.ပြောခဲ.ပါတယ် အခုကျွန်မသူကိုပြန်ပေးချင်ပါတယ် Pooh အရုပ်တော.မဟုတ်ပါဘူး ရင်ထဲကအမုန်းတွေကိုပါ ကိုသားဖြိုးသို.
ချစ်သူကို အနားမှာရှိနေစေချင်တယ်၊ပြီးတော့ ရင်ထဲကခံစားချက်လေးတွေကို သူ့ကိုပြောပြချင်နေမိတယ် . . .
Post By : အောင်ကိုကိုနိုင်
ကိုယ့်အတွက်အမြဲရှိနေမယ့် သူ့ရဲ့ ရင်ခုန်သံ
အလကားရတာပဲ ဟဲဟဲ ပေးတာယူမှုာပေါ့
ayan chit par dae so dae sagar lae ta khoon
Post By : Htet Htet
I ka talkachitatwak so yin takal ko kan ma kg bu
Post By : MgMinKoKo
Post By : နန်း
ဘာလက်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူပေးတဲ့လက်ဆောင်ဆိုရင် တန်ဘိုးအထားပြီးသားပါ သူများပေးတဲ့လက်ဆောင်လေးတွေဆိုရင် အိမ်မှာ အမြတ်တနိုးနဲ့ သိမ်းထားတတ်တာ ငယ်ငယ်ကတည်းကပဲ..........
Post By : waiyan
ဟဲဟဲ ..ပြောရမှာတော့မကောင်ဘူး၊ အဲဒီအဖြစ် အပျက်က လုံးဝ(လုံးဝ)မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ သူ က ကပ်စေးနည်းတယ်လေ..ဟဲဟဲ ဟိဟိ အဟိ
လက်ဆောင်..........မလိုချင်ပါဘူး သူများဆီက တခုယူပြီရင် ကိုယ်ကလည်းပြန်ပေးရတယ်တဲ့ အဲတော့ ကိုယ်ကလည်း မပေးချင်ဘူး သူ့ဆီကလည်း မလိုချင်ဘူး
Post By : အကြင်နာ
i need ,,,,,,,she ,,,,,,,life
Post By : skyblue
ကိုယ်ကချစ်ရတဲ့သူဆိုတော့ ရဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လို့ ကိုယ်ကပဲပေးချင်တယ် ..
ကိုယ့်ကိုတစ်သက်လုံးချစ်သွားမဲ့ချစ်သူဆိုရင်တော့..ရချင်တယ်....ဒါပေမဲ့...ကိုယ့်ကိုထားခဲ့မဲ့သူဆိုရင်တော့စိန်တေါရွှေတေါ ပေးလည်း မလိုချင်ပါဘူး....အဲဒီအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတစ်သက်လုံးကြေကွဲနေမှာလေ..
Post By :ိdandan
အချစ်တစ်ခုထဲပဲလိုချင်တယ်လို့တော့ မပြောချင်ဘူးကွယ် ကိုယ်က ချစ်သူပေးတဲ့လက်ဆောင်ဆို ဘာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါ တစ်ခုခုပေါ့ လိုချင်တယ် ငါ့ချစ်သူပေးတာလေးဆိုပြီးတော့လေ ဒါပေမယ့် ကွယ်
Post By : ကို့ချစ်သူ
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး သူကကပ်စည်းနဲတယ်လေ အသုံးအစွဲ စေ့စပ်တယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့
A yan chit da pa so dae sa ka ta khone
Post By : Nga thae
ယု လိုချင်တာက အချစ်
Post By : yumon
bar pal phit phit ya par tal,chit thu pay tar so talt happy ya tar pop.
ဆုံတွေ့ခွင့်မရှိတော့တဲ့ ဘ၀မှာ ဘာကိုများမျှော်လင့်ရမှာလဲ... မျှော်လင့်ချက်တွေအကုန်ပျက်စီးကုန်ပါပြီ.... ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမေ့သွားပြီလားကွာ ဘယ်တော့မှလမ်းမခွဲဘူးလို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကို အမှတ်ရရင်ပြန်လာခဲ့ပါကွာနော်...
Post By : ထာဝရ
ကိုယ်လိုချင်တာအားလုံးလေ... အရမ်းလောဘကြီးရာကျသွားမလား... အမှန်က လက်ဆောင်ဆိုတာ တော်တော်ကို ရွေးချယ်ရခက်တဲ့အရာပဲ... ပေးသူရော... လက်ခံသူရောပေါ့... ပေးတာတစ်ခု... လိုချင်နေတာတစ်ခု... (သို့) လိုချင်နေတာတစ်ခု... ပေးလာတာတစ်ခုဆိုရင် အလိုမပြည့်စရာပဲနော်... ဒါပေမဲ့လေ ရုပ်ဒြပ်လက်ဆောင်ဆိုတာထက် အလေးထားခြင်း၊ မြတ်နိုးခြင်း၊ သတိရခြင်းဆိုတဲ့ အရိပ်အငွေ့လေးတွေသာ ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်လေးမှာ ထင်ဟပ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ ပေးသူရော လက်ခံသူရော ကြည်နူးပြုံးပျော်ရမှာတော့ အမှန်ပဲနော်... ဘာလိုချင်လဲဆိုတာကတော့ ပြောဖို့ခက်သလို ဘာပဲရရလို့တော့လဲ မပြောချင်ဘူးနော်... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကလဲ ရင်ခုန်သံတွေကို ပြောင်းလဲနေစေမှာ ဖြစ်လို့လေ...
တို့ကတစ်ဖက်သတ်ချစ်ရတဲ့သူပါ အရမ်းခံစားရတယ်လေ သိကြမှာပါ
Ko I miss you.I wish you come back.
hee hee :0 kiss pop
1 yout tha` ko pa` chit pay par lo pway chin par tal
လိုချင်တာ ဖဲကြိုးလှလှလေးနဲ. စည်းထားတဲ. ပန်း
Post By : janmayhlaing
Post By :ူော
Post By : ဇင်မာလင်း
်ချစ်သူများနေ့ကျော်ပြီးမှသူ့နဲ့တွေခွင့်ရမယ်လေ သူပြန်လာတဲ့အခါ ဒေသတိုင်းမှာ ရှိတဲ့ အချစ်တွေဝယ်လာနော်။
Post By : shwegal2010
ချစ်သူဆီကဘာမှမမျှော်လင့်ပါဘူး.....မောင်သိပ်ချစ်တဲ့ချစ်လေး ဆီကိုပဲပြန်လာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်.... ပြန်လာခဲ့ပါကွာနော်...မောင်
ဘာပေးပေးပါ။ မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ကိုသိမ်းမိမှာပါ။ အရင်အရမ်းချစ်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူကတော့ စာအုပ်လှလှလေးတွေ ပေးခဲ့တယ်။ သူက ငယ်လေး အဲ့ဒါတွေကို ကြိုက်တတ်မှန်းသိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူသဘောအတိုင်းပေးချင်တဲ့အခါကျတော့ အရုပ်ပေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ တစ်ခုပဲပြောချင်တယ်။ ကို(ခ)ခိုင်လေးရေ......... သဲ ကို့အနမ်းတွေကိုတမ်းတသတိရနေတုန်းပဲ။ ချစ်နေသေးရက်နဲ့များချစ်သူရယ် ဘာလို့များကျောခိုင်းထားရတာလဲ။ နင့်မျက်ဝန်းတွေကို ဘာသာပြန်တဲ့နေရာမှာ ငါကအကျွမ်းကျင်ဆုံးပဲဆိုတာ နင်မေ့နေတာလား။ ပြန်လာခဲ့ပါချစ်သူ. ဘယ်တော့မှမလျော့၊ မကုန်ဆုံးတဲ့အချစ်တွေနဲ့ စောင့်နေပါတယ်လို့ ကြုံတဲ့သူပြောပေးပါဦး။ ကျွန်မသူ့ကိုသိပ်ချစ်တယ်လို့
Post By : မေကာရန်
Post By : mie mie
chit lo pay yin....they say taung.....tan phoe shi tar mo....bar pal phyit phyit...........................................................................
Post By : shwe4u75
nyein mar lo ate nay te 1 khu khu phyit late mal thin tal nyein khan sar chat time ko ma pyaw pal ne thu thi nay tal lay
သူ့ဆီကလက်ဆောင်ကိုတောင်းဖူးတယ်....သူကပြောတယ်...သူချွေးသုတ်ပြီးသားလက်ကိုင်ပုဝါ ကိုပေးမယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူပေးမသွားခဲ့ရှာပါဘူး
thu si ka bar pae ya ya lo chin par tal. But thu si ka khine myae tae love twe ya yinayan happy mi mhar pae. Thu pay par say loe su taung par tal. Brother yal quickly lay pay par naw
Post By : Princess
I want from her " A Big Kiss "
Post By : ko ko lwin
ဘာမှ မလိုချင်းပါဘူး အချစ်သူ ရင်ထဲမှာပဲ နေရင်ကျေနပါတယ် အခု ဆောင်းတွင်းလေ အရမ်းအေးလို့
Post By : ၀င်းကျော်စိုး
သူ့ ဆီက အခုဘာမှမလိုချင်တော့ပါဘူး။ သူပြန် အသက်ရှင်လာရင် ကျေနပ်ပါပြီ။ နောင်ဘ၀များ ရှိခဲ့ရင် သူ့ လက်ထပ်မဲ့ မိန်းကလေးဟာ ကျွန်မပဲ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူဆီက ရ မယ်ဆိုရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုချင်မိပါတယ်။သူ့ဆီက လက်ဆောင်လေးတစ်ခုတောင် မရ ခဲ့ဘူး လို့ပါ။
ကိုယ်နဲ့ အမြဲတမ်း အတူတူရှိနေနိုင်မယ့် အရာ တစ်ခုခုကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးတာကို လိုချင်ပါတယ်။ ဒါက သူ့က ကိုယ့်ကို အမြဲတမ်းသတိရနေစေချင်တာ သိရတာပေ့ါနော်။ ဟဲဟဲ
Post By : မင်းမမ
Post By : nobody
အချစ်တွေ ပေါ့ .......... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွှန်တော် က ချစ်စရာကောင်းတာကို မနာလိုမဖြစ်နဲ့ နော်
ကျွန်တော့် ချစ်သူက ကျွန်တော့် ကို လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင် သူပေးမဲ့ လက်ဆောင် က အေးချမ်းတဲ့ သစ်စာ တရားလို့ဘဲ ထင်မိတယ်...
Post By : မင်းအာကာကျော်
I will be satisfied all of the presents given by my sweetheart. But the present I like most is HER LOVE.
Post By : Zaw Win Aung
ကိုယ်ချစ်သူကပေးမယ့်လက်ဆောင် ဟာ ဘာ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ကျွန်တော်က အမြတ်တနိုး ယူ မှာ...ကျွန်တော် လို ချင် တဲ့ လက်ဆောင် က သူ့ဆီက စစ် မှန်တဲ့ အချစ် ကို ပဲ လို ချင် တယ်....ဒါ က တော့ လူတိုင်းတောင့်တ တဲ့ အလို ချင် ဆုံးသော အရာ လေ.......................
သူ. ကိုအနားမှာရှိနေတာကိုမြင်ချင်တာပါ.......အလိုက်လည်းသိစေချင်တယ်... စကားတွေအများကြီးလည်းပြောချင်တယ်.
Post By : မေဦး
bar pal phyit phyit par.but thu. si kaamyal tam chit nay mhar ko pal lo chin tal.ba wa 1 shout lone thu nae. pal .............................. ta that lone ma khwal thwar bu so tat sagar lay koalo chin sone par pal...............
flower or doll pop...inn lay bar pae phyit phyit ya par tal.....
Post By : nicky (shane)
နှင်းဆီနီတစ်ပွင့်၊ ချောကလက်တစ်တောင့် နဲ့ သော့ချိတ်လေးတစ်ခု ..........
၀က်ဝံရုပ်အမွေးပွလေးကို ကိုတစ်ဖက်သက်ချစ်တဲ့လူကပေးတာကို လက်ဆောင်အဖြစ်လိုချင်ပါတယ်
Post By : ဖြူစင်အိ
Post By : min yar zar
ဘာမှ မလိုချင်ပါဘူး.....ကိုယ့်ချစ်သူရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးကို ကိုယ် မသုံးရက်ပါဘူး...
chit thu ka pay ta`let saung so taw happy hmar par. But thu pay tar pa` u pe ko ka ma pay yin la`ma kg bu pop naw. ko ka la`let saung lay pay thint tar pop naw. Tan poe kyi ta`let saung ma pay naing yin taung "A NaN" lay taw pay thint par tal.
Post By : dragullar
ချစ်သူကပေးလာမဲ့ လက်ဆောင်ကိုမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးတယ်... ဝေးကွာသွားခဲ့ပေမဲ့ တခါမှမရခဲ့ဘူး...
Post By : snow
အရာရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ကျွန်တော်အလိုချင်ဆုံးကတော့ ရှက်ခြင်း ၊ ကြောက်ခြင်း ဆိုတဲ့ တရားဘဲ လိုချင်ပါတယ်
ဘာပေးမယ်လို့တော့ မ မှန်းတတ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့်.. ကျွန်တော်လိုချင်တာကတော့ သူ့ဆီက.."စစ်မှန်တဲ့အချစ်နဲ့ချစ်တာပါ"ဆိုတဲ့ စကားလေးတခွန်းကိုတော့တောင့်တမိပါတယ်ဗျာ.
fancy.boy.lay.july ရေမင်းဆီက အချစ်စစ် ကိုပြန်လိုချင်ပါတယ် ခွင့်ပြုပါနော်
Post By : jollysmile
င်္်pretty^^^boy ဆီကအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့ လက်ဆောင်စကားလေးတစ်ခွန်းလိုချင်ပါတယ်
Post By : moonstar^
အမုန်းဆိုတဲ့လက်ဆောင်ကလွဲရင်အကုန်လိုချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်အလိုချင်ဆုံးကတော့ အချစ်စစ်ပေါ့၊
Post By : ရတီပွင့်ဝေ
bar pay pay ya bar tal.bar lo la` so tal tu ko very love lo bar.
Post By : soe thi ha kyaw
ချစ်သူတော့မရှိသေးပါဘူး ဒါပေမယ့် ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက ပေးလာမယ့် ဘယ်အရာကိုမဆို အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားမိနေမှာပါ
ကို့ချစ်သူရဲ့ အချစ်စစ်အချစ်မှန်လောက် ဘယ်လက်ဆောင်က ကောင်းအုံးမှာလဲ။ ကျနော်အတွက် သူရဲ့အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်က သူရဲ့အချစ်စစ်ပဲပေါ့။
Post By : ထက်မြတ်
ချစ်သူရဲ့ အချစ်စစ်စစ်ကိုပဲ လိုချင်ပါတယ်။ သူ ချစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်စောင့်မှာပါ။
Nyain chan tae bawa taku ko lo chin tal . thu yae saunt shout mue tway nar mhar shin than loe ya mae life myo pot
Post By : yinmon(kyalsinlay)
a nan lo pal thin tal lay boy twe ka al lo paw tap tal ta kar ta lay kya yin
Post By : chomar
Post By : paing
ချစ်သူတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့... ဒါပေမဲ့..သူစီကတော့ ရုပ်ဝတ္တုတွေဘာမှတော့မလိုချင်ဘူး ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းပဲ မျော်လင့်နေမိတယ်....
Post By : မင်းမောင်မောင်
သူစီက..ချစ်ဖြေလွှာရခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ သူက...မိန်းကလေးဆိုတော့..အရင်ဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်သလို ကျွန်တော်ကပဲ..ချစ်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်နော်....
ကျွန်တော် လိုအပ်နေတာပဲ ဖြစ်မှာပေါ့
အနမ်း လက်ဆောင်လို့ထင်ပါတယ် ......
သူပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေဟာ ကျွန်တော်အတွက်တော့ရင်ခုန်သံ လက်တွေဖြစ်ပါတယ်
Post By : "ဒသနတ်"
အခုချိန်မှာအလိုချင်ဆုံးလက်ဆောင်က သူအရင်ကလိုအချစ်မျိုးနဲ့ပြန်မချစ်တော့ ဘူးဆိုရင်တောင် ကိုရ်ကချစ်တဲ့ အချစ်ကို မငြင်းပဲ လက်ခံပေးတဲ့ လက်ဆောင်ပါ။ အသိုင်းအ၀ိုင်းဆို တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဆက်မချစ်တော့ဘူး ဆိုပြီင်္း ရှောင်နေတဲ့ မောင့်ဆီကပါ။ဒီစာလေးကိုမြင်ရင် အဲဒီလက်ဆောင်ကို လိုချင်ပါတယ်ဆို တာ....
Post By : မယ်နှင်း
Post By : စိုးလင်း
Post By : မိုးတိမ် 19
ချစ်သူဆီကဘာလက်ဆောင်မှမလိုချင်ဘူးကိုယ့်ကဘဲပေးချင်တယ် လိုချင်တာတစ်ခုရှိတယ်ကိုယ့်ကိုတကယ်အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တဲ့ အချစ်လက်ဆောင်ကိုလိုချင်တယ်............................
Post By : johnyawhan
ချစ်သူရှိခဲ.မယ်ဆိုရင်........... လိုချင်တပ်မက်ခြင်းကင်းတဲ. ပေးဆပ်ခြင်းနဲ.ပဲချစ်ချင်တယ်........ မျှော်လင်.ရတာ ပင်ပန်းလွန်းလို.ပါ...........
အင်းသူသာ ကျွန်မကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သူပေးမယ့်လက်ဆောင်ဟာ ကျွန်မလိုချင်သာနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျနေမှာပါ ကျွန်မက ဂိတနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အရာတွေကိုအရမ်းသဘောကျတယ်ဆိုရင် ဂိတာလေးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား
Post By : Chit Su Lay 85
သူပေးတာကို ကျွန်တော်ကြိုသိနေတယ် သူအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကို လက်ဆောင်ပေးရင် ဖိနပ် ပဲပေးတယ် သူက ကျွန်တော်ဘ၀ရဲ့ အဖြည့်ခံတဲ့ လိုအပ်၇င် သူ့ဘ၀ကိုပါ နင်းသွားပါလို့ ပြောတက်တယ်လေ ဟီးးးးးးးးးး
just now ko ko is have not here. I want to need presant from him,this only.. ko ko hurry come back to Singapore..
Post By : woodlands
i want to hold my birthday together with him so plz come back to ygn
Post By : shwe sin
Post By : ဇေယျကျော်စွာမင်းဒင်
lover ka pay mhar RINHG nay mhar pop
Post By : moesatmay
ချစ်သူပေးတဲ့ လက်ဆောင် ဆို စေတနာ အချစ် တွေပါတဲ့ လက်ဆောင်ပဲ ထင်တယ်...............
Post By : ကောင်းမွန်ခန့်
thit sa ta yar
Post By : aakhant@gmail.com
Post By : aprilfourteen
ချစ်သူတော့ မရှိသေးပါဘူး မရှိသေးတဲ့ ချစ်သူပေးမယ့် အရာဟာ ကိုယ့်ကို ဖြူစင်တဲ့ ပန်းနုရောင်ချစ်ခြင်းလေးတွေပဲ ဖြစ်စေချင်မိတယ်...။ မ အပေါ် ပေးမယ့် ကျွန်တော့် ချစ်ခြင်းတွေဟာလည်း အဲ့လိုပဲ ဖြစ်နေစေရမယ်...။
Post By : nganay
ကိုကြီးပြန်လာတာညီမလေးအတွက် အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်မွန်ပါပဲ
Post By :့ မြတ်နိုးသူ
ုI want my bf true love and loyalty on me.Coz he had no love andalot of gfs.
Post By : stupid girl
တစ်ချိန်က...ချစ်ခွင်ရခဲ့တဲ့ ချစ်သူဆီက အခုချိန်မှာ...သူ့ဆီက အလိုချင်ဆုံး လက်ဆောင်ကတော့ သူ့ရဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ ချစ်ချင်းတရားတွေကိုပဲလို ချင်နေမိတာ အမှန်တကယ်ပါ...
Post By : ကင်းမောင်မောင်
nothing except love
Post By : main
ချစ်သူဆီကဘာကိုလိုချင်လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ပေါ်ကိုနားလည်ပေးမှုရယ်....သစ္စရှိနေမယ့်ချစ်ခြင်းနဲ့ တစ်သက်မမုန်းမဲ့အချစ်ပဲလိုချင်တယ် သူ့ကိုယ်ကိုယ်ပေးနိုင်တာက လည်းဒါပဲလေ
Post By : ဖြူ
အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဆိုတာအချိန်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချစ်နဲ့အချိန်ပေးနိုင်မှူကတိုက်ရိုက်အချိုးကျနေလို့ပါဘဲ ဒါဟာ၁၅၀၀အချစ်သာမကပါဘူး။၅၂၈အချစ်နဲ့လဲသက်ဆိုင်ပါတယ်
Post By : hikari
ချစ်သူကပေးတဲ့လက်ဆောင်ဆိုတော့..ချစ်သူရဲ့ကိုယ်ပွားလေးဖြစ်စေချင်တယ်.. သူ့ကိုသတိရတိုင်းအလွမ်းပြေစေမယ့်အရာလေးပေါ့.. ကိုယ့်အနားမှာအဖော်ပြုပေးနိုင်မဲ့အရာလေးလဲဖြစ်ရမယ်.. ကိုယ်အားငယ်နေတဲ့အချိန်ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူ..လို့သဘောထားပြီးရင်ဖွင့်ချင်တယ်.. သူ့ရင်ခွင်လို့သဘောထားပြီးနားခိုလို့ရတဲ့အရာလေးလဲဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့.. အရမ်းကြီးတဲ့အရုပ်ကြီးဆိုရင်အဆင်ပြေမလားနော်..ဟိ
Post By : မိုးစက်
မောင်ရေ အရမ်းလွမ်းနေပြီးကွာ မောင်ရော လွမ်းနေတယ်မဟုတ်လား မောင်မြန်မြန်ပြန်လာနော် ချစ်လေးမျှော်နေမယ်နော်မောင်
Post By : fortuneangel
chit thu ka pay mal so yin top kyan ter ma lo chin per buu chit thu ko pel pyan lo chin tel pyar lar per top chit thu yal
Post By : junekgmalay
Post By : ဖြူဖွေး
သူ အမြတ်နိုးဆုံးအရာတစ်ခုကို ပေးလိမ့်မယ်လို့ ထင်တယ် ...အဲဒီလိုပဲ ယူဆတယ် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကြင်နာခြင်းနဲ့ နားလည်မှုတွေ ပေးရင်တော့ ၀မ်းသာမိမှာပေ့ါ
Post By : ဇော်ထွန်းအောင် (zawhtunaung@gmail.com)
ချစ်သူရဲ့ အပြန်ခရီးမှာ ချစ်တယ်ဆိုတယ်စကားနဲ့ ထွေးပွေ့မှု ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်လိုချင်တယ်။
Post By : ဇင်
ချစ်သူရဲ့စစ်မှန်တဲ့ချစ်ခြင်းကိုဘဲလိုချင်ပါတယ်။လိမ်လည်မှုတွေ ကြားကရုန်းထွက်ပြီး စစ်မှန်သောမေတ္တာတရားရှိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပြန်လာခဲ့ရင်ဘဲ အကြီးမားဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်နေပါပြီ။
Post By : ညီမလေးဇင်
ချစ်သူတော့ ရှိတယ်။ဒါပေမယ့် တွေ့လိုက်တိ်ုင်း အချစ်အကြောင်းမပြောပဲ ။လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ကိုင်ပေါက်နေတယ်။ ပြင်ဆင်ထားတာ ဘာမှမရှိဘူးလို့ လဲပြောရော .. သီချင်းဆိုတဲ့ .. ကိုမျိုးကြီးတောင် .. ရွှေငွေနဲ့ အိမ်တိုက်မရှိပဲနေနိူင်တယ် လို့ဆိုထား တယ်တဲ့ ... ရှင်ကရော ... မျိုးကြီးလိုနေနိူင်လားတဲ့ .. လက်ထပ်မယ်လို့ ပြောပြောနေတဲ့ချစ်သူ ကိုတစ်ခါပဲပြောလိုက်တယ် ..အဲဒီသီချင်းကို .. ကျွန်တော်ပြန်ဆိုတေးအနေနဲ့ ဆိုမယ်လို့ .. IC ပါဌားပေးလို့ .. တစ်ခါထဲကို မင်္ဂလာပွဲဖြစ်သွားစေရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ် .. သူကဘာပြန်ပြောလဲထင်လဲ ..ဒါဆို ခုမှသတိရတယ် .. ရှင့်ထက်စာရင် .. IC က ကိုဝိုင်ဝိုင်း က ရူပါလာ တယ်တဲ့ .. သူနဲ့ပဲလက်ထပ်လိုက်တော့မယ် .. ရှင်ကတော့ .. ကိုမျိုးကြီးရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်မှုတွေနဲ့ ကျန်ရစ်ခဲ့ပေတော့တဲ့ဗျာ ............
ကျွန်တော် ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မှာသေချာပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုဘာကြိုက်တယ် ပြီးတော့ ကိုအလိုချင်ဆုံး ဟာကို သူက မှတ်ထားမှာပါ အဲဒီတော့ ကျွန်တော် လိုအပ်ပြီးကြိုက်တဲ့ ပစ္စည်း ပဲဖြစ်မှာသေချာပါတယ်
Post By : ပိုးဟပ်
Post By : အောင်အောင်
မဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူကဘယ်တော့မှအဲဒီလိုမတွေးတတ်ဘူး တကယ်လို.သူကပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်တမြတ်တနိုးသိမ်းထားမိမှာဘဲ
ချစ်သူ့က....လက်ဆောင်တခုပေးမယ်ဆိုရင်... အဲဒီလက်ဆောင်သာ..ပြန်ချစ်ခွင့်လက်ဆောင်ဖြင့်ခဲ့ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ...
သူ့ရဲ့နွေးထွေးတဲ့ ရင်ခွင်ထဲမှာ နေပြီး သူ့ဆီက အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ အတူပေးမဲ့အနမ်းလက်ဆောင်လေးကိုလိုချင်ပါတယ်...တစ်ယောက်သောသူနားလည်ပါစေ...
ထာဝရ မပြောင်းလဲသော အချစ်......
Post By : သဲလေး
Post By : မောင်ရဲ့...........
Post By : iceninja
Post By :့ ဟန်
ုဖြစ်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မှာပေါ့ စပ်ကို စု လွန်းတယ်
Post By : ကျော်စည်သူ
မျှော်လင့်မိတာ၁ခုပဲရှိတယ်။ အဲဒါကောင်လေးဆီက စစ်မှန်တဲ့အချစ်ကို ထာဝစဉ်တောင့်တမိတာပါ။ ဒီလိုခံစားချက်တွေကို ကောင်လေးအမြဲတမ်း နားလည်နိုင်ပါစေနော်။
Post By : ခိုင်
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူဆီက မနီးစပ်နိူင်တော့ရင်တောင် ထာဝရချစ်ခြင်းတွေကို တစ်ဘ၀စာ လက်ဆောင်အဖြစ်လိုချင်တယ်.... ပေးနိူင်ပါ့မလား....... အမုန်းတွေဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် သိမ်းထားမိမယ်ထင်တယ်.......
နက်(က)တိုင်ရယ်.... ဟာသကြိုက်တတ်ကျွန်တော့်အတွက် ဟာသစာအုပ်ရယ်... BD card ရယ်....... မျက်နှာသုတ်ပုဝါရယ်.......စာလေးတစောင်ရယ်...... ဒါပေမယ့် .......ချစ်သူတော့မဟုတ်ဘူး......
Post By : zwe han
သူကတော့ အေးစက်စက်စကားတွေကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးပြီး တစ်သက်လုံး သေအောင်သတ်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့..................
Post By : ရှင်းသန့်
သူဘက်က ကိုအတွက် ပေးလာတဲ့ ဘယ်အရာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကြည်ဖြူစွာနဲ့ထာဝရသိမ်းထားမယ်။ ချစ်လို့ပေးတာဆိုရင်ပေါ့
Post By : nyi nyi
chit thu ma shi bay myat phyu sin hmuh and true love ko lo chin mi may naw and....... ring, ayouth
Post By : princess.anu
Post By : ညီမလေး
ဖြူစင် သန့်ရှင်းတဲ့ အချစ်
အမြဲတမ်းအတွက် ရင်ခုန်နှုန်း(၁၅၀၀)ရှိတဲ့ စက္ကန့်မလပ်ရင်ခုန်သံတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့။
Post By : ရှမ်းတောင်တန်းမှ (mkkm)
အင်း................... သူအနားမှာရှိနေရင်ကျေနပ်နေပါပြီး၊ သူကအခုအဝေးကြီးမှာဆိုတော့လေ၊ သူပြန်လာရင်ကျေနပ်ပြီ်းအဲဒါကအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်မှာပါ၊ အဲဒါပဲလိုချင်တယ်
ိသူရဲ့အကြင်နာ။ သူရဲ့အချစ်။ အမြဲတိုင်း လိုချင်တယ်။
Post By : မေလေး
လိုချင်တာကတော့ ဖြူစင်မှုလေးတစ်ခုပါပဲ.............. သူဘာပေးလာမလဲ သေချာမသိနိုင်ပေမယ့် ဒီထက်ပိုမလိုချင်ပါဘူး.............. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကလည်း ဖြူစင်မှုတစ်ခုပဲပေးနိုင်တာမို့လို့ပါ...........
Post By : ထွန်းထွန်း(ကမ္ဘောဇ)
i KA TOP THU PAY TAR A KOUNG YU MAL.BAR MA SO...
Post By : ZAWMYOTHETT
Post By : cleverboy
သူဘက်ကလက်ဆောင်လို့ပေးတယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ဗိုက်အရမ်းဆာနေတယ်လေ။ Cafe Aroma မှာ coffee ပူပူလေးတခွက်ပေးသောက်ရင်ကြေနပ်ပါပြီ.. coffee ထဲမှာခံစားချက်တွေပါမှာပါ။ :P
Post By : gigi
အနမ်း ချစ်သူဆီကအနမ်း လက်ဆောင် တစ်ခါမှမရဘူးသေးဘူး အနမ်း ကိုပဲလိုချင်တယ် ဖြူစင်တဲ.အနမ်း...............
Post By : စည်သူ
Post By : K nice
Post By : ကဗျာ
Post By : ok
တန်ဖိုးနဲပြီး ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ card ကလေးတွေပဲ အမြဲတမ်းလိုချင်တယ်။သူမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာ cards တွေပဲအမှတ်တရ ကျန်ခဲ့တာလေ။
Post By : Ni Ni
သူဆီကတကယ်ချစ်တဲ့အချစ်စစ်ကိုဘဲလိုချင်မိပါတယ်............. သူပေးတဲ့အရာမှန်သမျှကိုတန်ဖိုးထားမှာ.............. သူဘာလေးပဲပေးပေးပေါ့ဗျာ၊အမုန်းဆိုတဲ့အရာကလွဲရင်ပေါ့နော်....
Post By : ထူးဟန်
Post By : iisan
haha !! မပြောတတ်ဘူး.တန်ဖိုးကြီးတာတွေတော့မလိုချင်ဘူး. အင်း Toyota land Cruiser လောက်ပါပဲ ... :P မပြောတတ်ဘူးကွ.ပထမဆုံးတော့ပျော်မှာပဲ.ကိုယ်လိုချင်တာဖြစ်နေရင်ပိုပျော်မှာ.... မလိုချင်တာဖြစ်နေလည်းသိမ်းထားဖြစ်မယ်ထင်တယ်.လိုအပ်တာဆိုကျေးဇူးလည်းတင်မှာပါ ဘယ်သူမဆိုကွာချစ်သူဆီကလိုချင်ကြတာချည်းပဲ.မယုံဘူးလား တစ်ချို့တွေကပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ချစ်တယ်လို့တောင်ပြောကြတယ် ဘာမှမလိုချင်ဘူးတဲ့ချစ်သူဆီက .အဲဒါမဟုတ်ဘူး ချစ်လာပြီဆိုရင် အတ္တဆိုတာပါလာကြတာပဲလေ.ဘာမှမလိုချင်ဘူးထားဦး ချစ်သူရဲ့ရယ်သံလေးတွေ၊ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုလိုချင်ကြတယ်လေ. ထားပါတော့ ကိုယ်ဆိုရင်ချစ်သူဆီကရင်ခုန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုပဲလိုချင်မှာပါ ဘယ်တော့မှမရိုးသွားတဲ့ ခံစားချက်ပေါ့.မဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး တစ်ချိန်ကြရင်ကိုယ့်ကိုရိုးသွားကြမှာပဲ.ကိုယ်ကလဲရိုးသွားလောက်မယ် မချစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ချစ်တယ်ရင်ခုန်စရာမကောင်းတော့တာ မင်းတို့အတွေးနဲ့မကိုက်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူး... ကိုယ်လိုချင်တာကိုပြောတာပါ sorry title နဲ့ ကိုယ်ရေးတာနည်းနည်းလွဲသွားတယ်
Post By : vampire.dede
haha !! မပြောတတ်ဘူး.တန်ဖိုးကြီးတာတွေတော့မလိုချင်ဘူး. အင်း Toyota land Cruiser လောက်ပါပဲ ... :P မပြောတတ်ဘူးကွ.ပထမဆုံးတော့ပျော်မှာပဲ.ကိုယ်လိုချင်တာဖြစ်နေရင်ပိုပျော်မှာ.... မလိုချင်တာဖြစ်နေလည်းသိမ်းထားဖြစ်မယ်ထင်တယ်.လိုအပ်တာဆိုကျေးဇူးလည်းတင်မှာပါ ဘယ်သူမဆိုကွာချစ်သူဆီကလိုချင်ကြတာချည်းပဲ.မယုံဘူးလား တစ်ချို့တွေကပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ချစ်တယ်လို့တောင်ပြောကြတယ် ဘာမှမလိုချင်ဘူးတဲ့ချစ်သူဆီက .အဲဒါမဟုတ်ဘူး ချစ်လာပြီဆိုရင် အတ္တဆိုတာပါလာကြတာပဲလေ.ဘာမှမလိုချင်ဘူးထားဦး ချစ်သူရဲ့ရယ်သံလေးတွေ၊ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုလိုချင်ကြတယ်လေ. ထားပါတော့ ကိုယ်ဆိုရင်ချစ်သူဆီကရင်ခုန်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုပဲလိုချင်မှာပါ ဘယ်တော့မှမရိုးသွားတဲ့ ခံစားချက်ပေါ့.မဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး တစ်ချိန်ကြရင်ကိုယ့်ကိုရိုးသွားကြမှာပဲ.ကိုယ်ကလဲရိုးသွားလောက်မယ် မချစ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ချစ်တယ်ရင်ခုန်စရာမကောင်းတော့တာ မင်းတို့အတွေးနဲ့မကိုက်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူး... ကိုယ်လိုချင်တာကိုပြောတာပါ sorry title နဲ့ ကိုယ်ရေးတာနည်းနည်းလွဲသွားတယ် vampire.dede
Post By : vampire.dede(21st.dede@gmail.com)
de 1 ku tot ma htin par buu var loe lal so tot kya naw 1 kar mha yee sar ma htar buu loe pal
Post By : watt.latt@gmail.com
tati ya yin pyi tar pa`
Post By : thriton
Post By : sainaung
I want to getawhite smile that is not contain other colours.
လမ်းခွဲခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင် ဟားဟား ရီရတယ် ဟေ့ သူငယ်ချင်းတို့ ရေ
လက်ဆောင် ပေးတယ် ဆိုတာက ခံစားချက် အမျိုးမျိုး၊ နဲ့ ပေးကြတာပါ။ သူ့ ဆီက ဘယ်လိုလက်ဆောင်မျိုး လိုချင်တာထက် သူပေးချင်မှ ဖြစ်မှာလေ။ မျှော်လင့်နေခွင့် ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ အချစ်စစ်ကို လိုချင်ပါတယ်။ ချစ်သူ ဘ၀မှာ တစ်ခါမှ သူ ချစ်တယ် ဆိုတာကို မခံစားခဲ့ရလို့ပါ။ ပေးမယ်လို့တော့ မထင်ဘူး။သူက အချစ်ဆိုတာ ကို ဘာမှန်းသေချာမသိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ အဲဒါကြောင့်လဲ လမ်းခွဲခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး လက်ဆောင်ဖြစ်နေမလားတောင်မသိဘူး။
Post By : D naung
keychain သို့မဟုတ် နူးညံ့တဲ့အနမ်းတစ်ပွင့်ပဲဖြစ်မှာပေါ့။
Post By : တင်ဇာ
thu tat naing tar bae phit mar pop
Post By : moth
i chit thu ka SU NGE SANDAR AUNG i thu koayan chti tal thu ka ball thamar thu ka hsume tal lay i letter read thu are lone chit tet par say! HSU THIRI ZAW
Post By : HSU THIRI ZAW
lover so tar god pay tae su par
Post By : anonynous
Post By : june june
teddy bear lay taw. phit mal htin tar pal, answer kyi ka yee sa yar kyi phit nay pin mae, that sine thu ka taw. ti mhar par,
Post By : JN
ချစ်သူစီက မျှော်လင့်မိခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုလိုချင်မိတာကတော့အမှန်ပါပဲ ဒါပေမယ့် မဖြစ်ဘူးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိနေခဲ့တယ်/ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူနဲ့ကိုက အရမ်းကိုကွာခြားတွေရှိနေခဲ့လို့ပဲ/ တစ်ဖက်သတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ ညီမလေးကို ချစ်ခဲ့ရတဲ့ ကို
Post By : vanthathang
ကိုယ့်ကို ပေး တာ ဘဲ ယူ မှာပေါ့ dar ပေ မဲ့ မြတ်နိုး မှု တော့ ရှိ ရ မယ်
Post By : htootintaungaye
Post By : sue
သူ့ဆီက အချစ်နဲ့ နားလည်မှုတွေကိုပဲ လိုချင်ပါတယ်...
Post By : ပိုး
Post By : starflower
Post By : april8mon
ချစ်သူဆီက လက်ဆောင်ဆိုရင် အရမ်းဂရုစိုက်ပြီး ချစ်နေစေ့ချင်ပါတယ်။ဟန်နီ့ ချစ်သူက ဟန်နီကို ဘယ်တုန်းကမှ ဂရုမစိုက်ဘူးပါဘူး။ဒါ့ကြောင့် ချစ်သူ့ဆီက လက်ဆောင်ဆိုရင် ဂရုတစိုက်နဲ့ ချစ်တာကိုပဲ လိုချင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူက လက်ဆောင်ဆိုတာကို ပေးရကောင်းမှန်းမသိတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမယ့် သူ့ကို မမုန်းမိဘူး။ အချစ်တွေကတော့အေးစက်နေလို့ စိတ်တော့ တော်တော်ကုန်နေပြီ။
chit thu yae ga yu site mhu lay tway lo chin tal bar loth lal so tot chit thu ka away gyi ko youk nay loth pop
Post By : nyimalay
i just want to getapropose for marriage,this mean he would be with me to the end and he would have noone but me in his heart
i just want to getapropose for marriage,this mean he would be with me to the end and he would have anyone but me in his heart
Post By : myatmon(real sister)
i think she give me beautiful book
Post By : nay htet aung
Post By : tharnge
Bae tot ma kwell ma twar par woo so tae promise lay 1 khu pal lo chin tal
Post By : H.Pyae
chit thu se ka phyu sin tae kiss lay (1)ku lout ya chin par tae
Post By : htet
ွူိုchit thu pay tae lat saung so yin ber pe pe phyt phyt tan po htar mar par.
Post By : yoe
အခုအချိန်မှာ ငါလိုချင်တာကတော့ အရင်လိုငါအပေါ်မှာထားတဲ့ ကတိကိုမပျက်စီးစေချင်ဘူးနီလာ ငါတောင်းပန်ပါတယ်
Post By : ei ei
ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ ချစ်သူဆီကလက်ဆောင် တစ်ခါမှမရဘူးသေးဘူး ချစ်သူသက်တမ်းက ၄နှစ်လောက်ရှိပြီ။ လိုချင်တယ် အရမ်းပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ပြောလဲမထွက်တော့ အရမ်းခံစားရတယ်။
Post By : ခွန်းညို
thisar & narr lal mhu
Post By : peh
သူ့ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ သူ တန်ဖိုးထားတာ(သူ့ဘက်ကအကောင်းဆုံး)ကို သူ့ချစ်သူ(ကိုယ့်)ကို ပေးချင်မယ်လို့ . . .
Post By : ကိုလင်း999
သူ့ဆီက စစ်မှန်တဲ့ အချစ်ကိုပဲ လိုချင်တယ်. ရမလားတော့ မသိဘူး.
ချစ်သူပေးမှာကတော့ အင်း ပျော်ရွှင်စရာထက်ဝမ်းနည်းစရာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ချစ်သူက ကိုယ့်ကို မချစ်ဘူးထင်တာပဲ
I wanna get all of his love.I wanna know him "I love him,so much" I love abignale,so much.I wanna get pure love from him
Post By : pincky(ZZ)
so many kiss
Post By : chit thu
" chit tae" so tae sa kar ta khon bae lo chin bar tae.
Post By : Phoo Phoo
အင်း နှင်းဆီပန်းအကြီးကြီးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ် နှင်းဆီပန်းဘဲ လိုချင်တယ် နှင်းဆီပန်းဘဲ ဖြစ်စေချင်တယ်
Post By : chitthumay
Post By : ထက်ထက်
tis sar shit nay mal so yin top iatwatakg sone lat song par pal
Post By : mee mee
a myal tanatwat thu. se ka te myal talachit ko pal loe chin par tal
Post By : thaw lay
Post By : main ka lay
He will give me not only happies but also sad,I think.
Post By : april
a nar mharamhan ten thar lo ya mai pyit see 1 khu khu lo thin par tal
Post By : su lay
ကိုယ့်ချစ်သူပေးတာပဲ ဘာဖြစ်ဖြစ် လက်ခံရမှာပေါ့
Post By : စိုးလူ